Michigan & Keokuk Cleanup • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
မီချီဂန် & Keokuk Cleanup
ဖြစ်ရပ် 26:9 pm တွင် @ ဇွန်လ 00
အနီးအနားရှိသန့်ရှင်းရေးအတွက်မီချီဂန်ရိပ်သာလမ်းနှင့် Keokuk လမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ အမှိုက်များကိုကောက်ယူပြီးမြက်ပင်နှင့်ပေါင်းပင်များကိုခုတ်ယူသည့်လုပ်ကွက်များ၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေလိမ့်မည်။ သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်၍ သင်၏လုပ်ကွက်များကိုစုစည်းရန်အနီးအနားရှိအဖွဲ့အစည်းများလည်းသင့်တွင်ရှိသည်။ ကနေအခမဲ့ကော်ဖီ Plus အား Black ကကော်ဖီ နှင့် Shay ရဲ့ Donuts ကနေ donuts!
သန့်ရှင်းရေးကိုကမကထပြုသည် အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှုကုသမှု၊ လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့, စိန့်ဂျိုးဇက်အိမ်ရာစီမံကိန်း, စိန့်လူးဝစ် Brightsideနှင့် နေခြည်.
သင်၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းသို့မဟုတ်သင့်အိမ်ခြံမြေပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အကူအညီလိုပါကအောက်ပါပုံစံကိုဖြည့်ပါ။
Location: Michigan & Keokuk
စည်းရုံးရေးမှူး: DT2 • Downtown Dutchtown
ယခင်ဖြစ်ရပ် Dutchtown CID ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့
နောက်အဖြစ်အပျက် DSCC လူထုစွမ်းအားမြှင့်တင်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး
အောက်မှာ Filed သန့်ရှင်းရေး. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. သန့်ရှင်းရေး, ဒိန်းမတ်နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဤအဖြစ်အပျက်ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤအဖြစ်အပျက်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ဖော်ပြခဲ့သည် ဇွန်လ 16th, 2021 .
ဒိန်းမတ် ဖြစ်ရပ်များ သန့်ရှင်းရေး မီချီဂန် & Keokuk Cleanup